Mpitatitra - Sendikan’ny CUA : Mitaky ny fialan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo -
AccueilRaharaham-pirenenaMpitatitra – Sendikan’ny CUA : Mitaky ny fialan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo
20/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mihenjana ny tady eo amin’ny Fikamban’ny mpitatitra ahitana ny avy amin’ny FTAR (taxi) sy ny UCTU (taksibe), ny eo anivon’ny Sendikan’ny CUA misy ny SMKAR, sy ny Kaominina Antananarivo- Renivohitra (CUA).
Araka ny daty efa voatondro, dia notanterahin’ny teo anivon’ny FTAR ny fitokonamben’ny taxi, omaly. Nitety faritra nanomboka teny Ankorondrano nihazo ny lalam-baovao nivoaka teny Andohatapenaka nandalo Andavamamba sy Ampefiloha, Anosy ary nifarana teo amin’ny Lapan’ny Tanàna tetsy Analakely izany filaharamben’ny taxi teto an-dRenivohitra izany.
Rehefa nigadona teo amin’ny Lapan’ny Tanàna, raikitra amin’izay ny horakorak’ireo mpitatitra teo anivon’ny FTAR amin’ny fitakiana ny fialan’ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana.
Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy mila ny Ben’ny tanàna intsony izy ireo, ary tokony ho soloina Filohan’ny delegasiona manokana, na PDS ny toeran’ny Ben’ny tanàna. « Tsy mazava ny fitantanana, ary tsy misy mangarahara intsony ny eo anivon’ny CUA », hoy ny lehiben’ny FTAR, Clémence Raharinirina.
Nilaza hatrany ity filohan’ny FTAR ity tamin’izany fa sambany no nisian’ny fihetsehan’ny taxi marobe toa izao, izay nahatratra 2 000 teo ho eo izay ireo. « Ampy izay! Leo be amin’ny antsonjay ataon’ny CUA aminay izahay! Tofoka tanteraka amin’ny teritery sy fitadiavam-bola ataon’ny CUA izahay ! ». Izany rehetra izany no re tamin’ny horakorak’ireo mpitatitra marobe tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna.
Voalaza hatrany mantsy fa fanerena indimy nisesy tao anatin’ny herintaona no nasetrin’ny kaominina ny taxi. Ny voalohany amin’izany, hoy ny filohan’ny FTAR, ny teo amin’ny fanaovana fanisana ireo taxi, ny fanerena hametraka soratra tamin’ny vatan’ny fiara, ny saram-piantsonana, ny “lanterne”, ary farany ny famindrana ny fitantanana ny ivon-toeram-pitiliana fiara ny orinasa Omavet. “Ireo rehetra ireo no antsonjay natao tamin’ny taxi tao anatin’ny herintaona. Noho izany tsy hanaiky intsony izahay, ary hanohitra izany. Tsy manaiky hatramin’ny farany”, hoy i Clémence Raharinirina
Ankoatra izay, nanambara ny teo anivon’ny FTAR fa tsy vao izao akory no nisian’ny fikorontanana sy fanakorontanana teo amin’ny mpitatitra an-dRenivohitra. Voalazan’izy ireo fa hatramin’ny nitantanan-dRavalomanana no nisian’ny korontana eo amin’ny mpitatitra. “Ingahy Ravalomanana no nanery ny taxi nolokoina ho “Beige crème” tamin’ny fotoan’androny. Ankehitriny, mbola avy amin’ny fitantanan-dry Ravalomanana ihany, terena tsotra izao indray ny taxi hanaraka izao antsonjay rehetra izao”, hoy izy ireo tamin’izany.
Raha izany rehetra izany, hita ary voaporofo izao fa mpanakorontana fiainam-bahoaka no tena ataon-dry Ravalomanana mivady sy ny ekipany. Nohamafisin’ireo mpitatitra eo anivon’ny FTAR ihany koa fa tsy hanaiky velively, ary tsy hanaiky intsony ny hanaovana fitaovana fitadiavam-bola ho an’ny olona manokana fa tsy an’ny CUA izy ireo. Voalaza mantsy fa hamoronan’ny CUA fifanarahana isan-karazany ny taxi izay tsy vola miditra mivantana eny anivon’ny kaominina akory izany. “Natao hamelona olona manokana izany ny mpitatitra madinika? Ireo orinasa tsy miankina akaiky ny Ben’ny tanàna mivady sy ny ekipany no tena mahazo tombontsoa. Noho izany, tsy ekenay hatramin’ny farany izao zavatra ataon’ny CUA aminay izao”, hoy hatrany ny FTAR.
Nohazavain’i Clémence Raharinirina mantsy fa mizaka ny tsy eran’ny aina ny taxi satria tsy misy afa-tsy 15 000 Ar isan’andro ny “versement”-n’izy ireo nefa mandoa “patente”, fiantohana (assurance), ny fitiliana sy fitsirihana (visite), sns, izy ireo.
Hitohy ny hetsika
Etsy andaniny, nanambara ny avy amin’ny fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra, na ny FTAR fa rehefa tsy mihemotra ary miziriziry amin’ny heviny ny avy amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, hitohy ary hihamafimafy kokoa ny hetsika ataon’izy ireo. Raha ny fanazavana mantsy, hiroso amin’ny fitokonambe ihany koa ny avy amin’ny UCTU hivondronan’ireo taksibe eto an-dRenivohitra, ny alakamisy 21 septambra izao. Marihina fa mitovy amin’ny an’ny FTAR ihany ny fitakian’ny UCTU.
Nambaran’izy ireo mantsy fa efa nanome fe-potoana roa herinandro ny kaominina izy ireo hiverenany amin’ny fanapahan-keviny saingy, tsy nisy vidiny sy valiny akory izany fangatahana nataon’izy ireo izany. “Mbola miziriziry amin’ny heviny hatrany ny CUA amin’ny fampiharana fa manomboka volana janoary 2018 izao dia ny orinasa tsy miankina Omavet no mitantana ny Ivon-toeram-pitiliana fiara etsy Antsakaviro. Ho hitantsika eo ny mety ho tohin’ny raharaha rehefa mbola tsy miziriziry ny kaominina”, hoy hatrany izy ireo.
Marihina mantsy fa ny fanomezan’ny CUA tampoka ny fitantanana ny ivon-toeram-pitiliana fiara etsy Antsakaviro ny orinasa tsy miankina Omavet, izay voalaza fa akaiky ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, ny tale jeneralin’izany, no tena anisan’ny fototry ny olana.